OSRFramework: chengetedzo neSpanish flavour | Linux Vakapindwa muropa
OSRFramework: chengetedzo neSpanish flavour
Nyanzvi zhinji dzekuchengetedza dzinenge dzichiziva nemhando dzemapurojekiti uye dzinozoshandisa kazhinji pakuongorora kwavo kwekuchengetedza. Ini ndinotaura chaizvo nezve OSRFramework, chinoshandiswa chakagadzirwa neseti yehurongwa uye maraibhurari pasi peGPLv3 rezinesi yeOSINT (Open-Source Intelligence) mhando, ndiko kuti, yakavhurika njere software. Uye zvakare, sekufambira mberi mune zita, chirongwa ichi chakamera muSpain, saka chakatangira munyika yedu.
Rudzi rwe software, uye dzimwe nzira dziripo, idzo dzinoverengeka, dzinoshandiswa kuunganidza marudzi ese e data nezve vamwe vashandisi iyo inobatana neInternet, ichitevera nzira yavo kupfuura zvatinogona kufungidzira kana tisina ruzivo rwekuchengetedza komputa. OSRFramework isu tine chikwereti kuna Yaiza Rubio naFéliz Brezo, ivo vaviri vakuru vanogadzira chishandiso ichi kuteedzera iyi ruzivo kwatinotarisa. Pamusoro pechiitiko chayo padandemutande, OSRFramework zvakare inokwanisa kutsvaga vashandisi mukati meinonzi Yakadzika Webhu kana iyo yakadzika Internet.
Zvese zvekutenda kune dzakaomarara njere algorithms iyo software iyi inosangana kuti iite basa rayo. Kana iwe uchifarira kuziva kuti inogadzirwa sei, kuti uzive zvirinani kuti inoshanda sei, unogona kuona kodhi yayo uye dhawunirodha kubva kuGitHub. Kuti uiongorore iwe unofanirwa kuve neruzivo rwePython mutauro mutauro, nekuti ndiyo iyo vashandisi vayo vakashandisa kuigadzira. Mutauro uyu unoupawo kugona kushandiswa mune chero sisitimu inoshanda, ichiita kuti utakurike.
Pakati pe Mazuva ese Homeworks Kune iyo yainoshandiswa, ivo vanobva pakutsvaga cybercriminals kana nzira yevanofungidzirwa kuburikidza nemambure kuti vawane dhata remiedzo nekuvapa seuchapupu, kana kubata zvisakarurama zvavo, kune mamwe mabasa sekutarisa vashandisi mukati mekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kwakaitwa kune kambani , nezvimwe. Ehezve, sekune zvese, inogona zvakare kushandiswa kune zvakaipa ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Free Software » OSRFramework: chengetedzo neSpanish flavour
Linux ndiyo yakanyanya kushandiswa kuitisa DDoS kurwisa
Maitiro ekuisa Fedora 24 yenewbies